Antsafa niarahana tamin’i Gladys Camacho Rios, mpikatroka nomerika ho an’ny fiteny Quechua · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2020 5:32 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , English, Ελληνικά, Italiano, Español
Ny taona 2020, hotohizantsika ny fanentanana ety anaty media sôsialy hanasàntsika olona maro hitantana ny kaonty Twitter, @ActLenguas (Fikatrohana ho an'ny fiteny) ka hizaran'izy ireny ny niainan-dry zareo tamin'ny tamin'ny famelomana indray sy fisoloana vava ireo fiteny zanatany. Resahan'ity lahatsoratra fampahafantarana ity ny momba an'i Gladys Camacho Rios (@chhullunka) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Gladys Camacho Rios no anarako. Avy any amin'ny tanànan'i Kalallusta any Cochabamba, Bôlivia. Notahiana aho fa nandova ny tenindreniko Quechua sy ny kolontsaina ary ny fomba fanao avy any atsimon'i Bolivia. Hatramin'ny 2011 aho no nanoratra tamin'ny fiteny Quechua, ka tanjona amin'izany ny hitahiry ny fombandrazan'ny vahoaka niaviako.
Tamin'ny 2013, namoaka boky iray aho tamin'ny fiteny Quechua, nampitondraina ny lohateny hoe “Phuyup Yawar Waqaynin” (“Ny ranomason-dràn'ny rahona”). Tamin'ny 2018 io tantara io dia navoaka tamin'ny fiteny roa miaraka Quechua-Anglisy.
Tamin'ny 2019 aho namoaka boky iray misy angano telo momba ny amboahaolo. Amin'izao fotoana izao aho dia manomana diplaoma PhD momba ny Teny ao amin'ny Anjerimanontolon'i Texas ao Austin, Etazonia. Andraisako anjara ihany koa ny fikatrohana nomerika, ny fanandratana ireo mpiteny teratany toa ahy izay mpanoratra sy mpikaroka manome aina vao ny fiteny teratany an-dry zareo.
Tiako ny hampiroborobo ny Quechua ho toy ny L1 (tenindreny) araka ny itenenan'ny olona iray azy izay teraka sy nobeazina tany anaty vondrompiarahamonina iray tambanivohitra, satria io no akaiky kokoa ny Quechua tokam-piteny. Tiako ihany koa ny hampiroborobo ny Quechua tokam-piteny. Nanomboka tamin'ny 2018, nanao fandraketana an-sary sy feo aho momba ireo Quechua tokam-piteny ao Uma Piwra. Nanoratra tantara telo aho, mifototra amin'izay angona vitako. Tiako ny hizara ireny tantara ireny amin'izay fomba azo atao.
Tiako ihany koa ny hizara izao rakipeo noforoniko tamin'ny fiteny Quechua mba hanaovana tatitra momba ny Covid-19. Namorona aho tatitra iray an-tsary sy feo momba ny aretin-tsaina ho an'ireo ray aman-drenibe tokam-piteny ary ho an'ny daholobe. Fiarahana miasa tamin'ny Ivontoerana Fianarana ny faritra Amerika Latina sy Karaiba avy ao amin'ny Anjerimanontolon'i New York sy ny Anjerimanontolon'i Kôlômbià, ny CUNY ary ny Lehman College, ho anà tetikasa madinika natao taminà fiteny teratany efa ho 20 ao Abya Yala.